महिलाहरुमा यौन चाहना भए नभएको कसरी थाहा पाउने ?
२०७४ कार्तिक ४ शनिबार
सामान्यत महिलाहरु पूरुषको दाँजोमा यौंन सम्पर्क गर्न चाहाना भएपनि व्यक्त गर्न वा बोलेर भन्न सक्दैनन् । यसर्थ यहाँ महिलाहरुमा यौन चाहना भएको कसरी थाहा पाउने भन्ने विषयमा सामान्य चर्चा गरिन्छ ।
उनीहरु यौन सम्पर्क गर्ने तिव्र इच्छा हुँदा हुँदै पनि दवाएर राख्ने गर्दछन् । यसर्थ उनीहरुको आन्तरिक इच्छालाई पुरा गरिदिने जिम्मा पूरुषको हुन सक्छ । त्यसैले यसलाई कसरी थाहा पाउने त ? जिज्ञासा हुनु स्वभाविक हो । त्यसका लागि महिला पूरुषको नजिक हुँदा उनीहरुले देखाउने गतिविधीलाई विचार पर्याउनु भयो भने सहज हुन सक्छ । तर सबै व्यक्ति र सबै ठाँउमा यी कुरा लागु नहुन पनि सक्छन् ।
यदि स्त्रीले तपाइँको नजिक भएर लामो–लामो र गहिरो स्वास लिइरहेको अनुभव गर्नु भयो भने तिनीलाई संभोगको इच्छा वा उत्तेजना भएको हुन सक्छ । प्राय: स्त्रीहरु उत्तेजित भएको अवस्थामा गहिरो र लामो श्वास फेर्न थाल्छन् ।
अझ स्त्रीले ओच्छ्यानमा बसेर त्यसमा पल्टिने, थकान भएको जस्तो गरि आलस्यता प्रकट गर्ने जस्ता ब्यवहार गर्न थालिन् भने उनीलाई संभोगको इच्छा जागेको हुन सक्छ ।
प्राय: सबै स्त्रीहरु संभोगको तिव्र इच्छालाई शब्दमा प्रस्तुत गर्दैनन्, उनीहरु कतिलाई माथि भनिएका संकेतका कृयाकलापहरु गरिरहेको छु भन्ने उनी स्वयमलाई पत्तो नहुन सक्छ, एकहोरो रुपमा पूरुषलाई हेरिरहने अथवा झुक्याई–झुक्याई पूरुषको संवेदनशिल अंगलाई हेर्ने, नजानिदोगरी शरीरले छुने सम्मका गतिविधी हुन सक्दछन् ।
यदि तपाइँसँग रहेकी स्त्रीले तपाइँलाई अंगाली रहेको समयमा उनको शरीर उनैलाई गह्रौं भएको जस्तो गरी कम्मर अथवा अन्यत्र हात राख्छिन् भने उनलाई संभोगको लालच भएको हुन सक्छ ।
अहिले त सामाजिक संजालको विकास संगै कतिपय केटिहरुले पूरुष संग भएका च्याटमा त्यस्तै खालका साइन वा तस्विर पठाउने गर्दछन् । उनीहरुको च्याटका शव्दहरु पनि अलि फरक प्रकारका जस्तै–टाउको दुखेको छ, अल्छि लागेको छ, निद्रा लागेन आदि हुन सक्छन् ।
स्त्रीले कुनै नजिकको पूरुष संग शारीरिक सम्बन्ध राख्न चाहेमा उनीहरुको शरीरमा अलि बेग्लै खालको परिवर्तनका संकेतहरु पनि देख्न सकिन्छ । प्राय: सबै महिलाको अनुहारमा बेग्लै प्रकारको रंगको परिवर्तित रुप देख्न सकिन्छ । अनुहार रातो हुने वा शरीरको तापक्रम बढ्ने जस्ता लक्षण देखिनाले स्त्रीमा यौन चाहना भएको सजिलै थाहा पाउन सकिन्छ ।
तर सबै स्त्रीमा यो क्रियाकलाप वा गतिविधी नहुन सक्छ । केहि यस्ता प्रकारका गतिविधी मिल्दा जुल्दा देखिदैमा दुई बीचको नाता सम्बन्धलाई बिग्रने खालका व्यवहार भने गर्नु हुँदैन । दुई बीचको सहमतिका आधारमा वा स्पष्ट कुरा राखेर, राख्ने वातावरण बनाएर मात्र यौन सम्पर्क राख्नु राम्रो र स्थायी हुन सक्छ ।–एजेन्सी